UEFA: Platini lama beddelayo racfaanka kahor - BBC Somali
UEFA: Platini lama beddelayo racfaanka kahor
Image caption Kubbadda rasmiga ah ee lagu ciyaarayo UEFA
Xiriirka Kubbadda cagta ee Yurub waxay sheegeen in aanay qaban doonin doorasho si madaxtinimada xiriirka looga beddelo Michell Platini inta uu ka dhammaanayo racfaanka uu ka qaatay xayiraadda siddeedda sano ah ee uu ku xukumay guddiga anshaxa ee FIFA.
Mr Platini iyo guddoomiyihiisa FIFA, Sepp Blatter, waxaa guddiga anshaxa ee FIFA ay saareen mamnuucid siddeed sano ah oo ku saabsan lacag hal milyan oo dollar ah oo Blatter uu siiyay Platini oo uu sheegay inuu shaqo u qabtay FIFA.
Platini waxaa uu racfaan u qaatay FIFA, haddii uu ku guulaysan waayana waxaa uu aadi doonaa maxkamadda caalamiga ah ee arrimaha sport-ga.
Waxaa uu horeyba uga baxay tartankii doorashada madaxtinimada FIFA oo bisha dambe la qabanayo.
Xubnaha UEFA waxay si loo dhan yahay u taageereen madaxa ku-meel-gaarka ah ee xiriirkooda, Gianni Infantino, oo u tartamaya madaxtinimada FIFA.